Nzira Shanu dzeKukwidza Yako Yemukati Yekutengesa Mutambo | Martech Zone
Chipiri, April 2, 2019 Chipiri, April 2, 2019 Martha Jameson
Kana iwe uri kuita mune zvemukati kushambadzira chero mhando, saka uri kushandisa zano. Iyo inogona kunge isiri yepamutemo, yakarongwa, kana inoshanda zano, asi iri zano.
Funga nezve iyo nguva yese, zviwanikwa, uye nesimba zvinopinda mukugadzira zvakanaka zvemukati. Hazvina kudhura, saka zvakakosha kuti iwe utungamire izvo zvakakosha zvemukati uchishandisa chaiyo zano. Hedzino shanu nzira dzekusimudzira yako yemukati yekutengesa mutambo.
Iva Nenjere Nezvako Zvekushandisa
Zvemukati zvekushambadzira zvinogona kudhura, kunyangwe izvo zvinoreva kuti iwe uchiisa muhombe yakawanda yenguva yako kugadzira zvemukati, kana kushandisa mari kuiburitsa kunze kune yekugadzira. Chinhu chinodhura sekushambadzira zvemukati chinoda kutungamirwa zvine hungwaru uye kutarisa kuma analytics chikamu chikuru cheizvozvo.
Iwe unogona here kufungidzira kuisa mune zvese izvo zviwanikwa chete kuti uone kuti wanga uchisundira zvemukati zvako paFacebook apo ruzhinji rwekushambadzira kwako traffic kwainyatso kubva ku Instagram nePinterest? Izvo zvinorwadza; uye haungave iwe munhu wekutanga kuona izvozvo. Tora nguva kuti utarise yako yemagariro midhiya analytics kuti ugone kunongedza zvemukati zvako kurudyi mapuratifomu uye vateereri.
Sangana NeChikwata Chako Kazhinji
Iwe unogona kunge uine timu yakatsaurirwa kune zvemukati kushambadzira, kana iwe ungasadaro. Chero zvazvingaitika, zvakakosha kusangana kamwechete pasvondo uye nekubata base nevanhu vane basa rekugadzira nekusimudzira zvemukati. Kana uchikwanisa, sangana zuva nezuva.
Taura nezve chero chinhu chitsva chakagadzirwa kubva pawakasangana kwekupedzisira. Tarisa kune ramangwana uye govera mabasa kuvanhu chaivo. Kurukurai zviri kuitwa nevakwikwidzi vako uye nemabatiro aungaite pane zvavo zvemukati.
Bonnie Hunter, kushambadzira blogger pa Australia2Write uye NyoraMyX
Iyi misangano zvakare inguva huru yekuisa misoro pamwe chete uye nekuita zvekufunga. Ndedzipi dzimwe nyaya dzinopisa dzinofamba timu yako inogona kunge ichivaka zvemukati zvakapoterera?
Vaka Vateereri Vako
Tarisa pakukura vateereri vako. Mutemo mutsva urikuti data rinofanira kuunganidzwa nemvumo, zvinoreva kuti dhata rinopihwa nechido uye kwete kukohwewa. Zvemukati zvekushambadzira zvinotonyanya kukosha nekuuya kwemutemo uyu nekuti zvakanaka zvemukati inzira huru yekukurudzira vanhu kuti vafare vachipa ruzivo rwavo.
Kana vanhu vachida zvemukati mako, ivo vanozopa yavo data nekuti ivo vanoda kuramba vachigamuchira zvinhu zvako. Funga nezve yakanyanya kunaka inoshanda modhi iri pane kukwenya internet yedhata revanhu vasingakwanise kutarisira zvishoma. Inokupa iwe mukana wekuvaka hukama nevanhu uye uchivatendera kuti vanzwe vakabatana nezvako zvemukati.
Billy Baker, zvemukati zvemusika pa BritStudent uye NextCoursework.
Tora tembiricha yekubudirira kwesimba rako nekutarisa kune vateereri vako manas, kutarisa manhamba ako maringe negore rapfuura, uye nekuona kana wako anotinyorera kuverenga achienderana nezvirimo zvekushambadzira kuedza.
Iva Nezvinangwa Zvakakodzera
Kana iwe usingazive izvo zvemukati zvekushambadzira zvinangwa, ungazviite sei? Chikamu chikuru chekumisikidza izvi zvinangwa chinozovakirwa pane yako analytics, mienzaniso:
Ndeipi chikuva chauri kugadzirira zvibodzwa?
Iwe unoda kuve kupi mugore?
Iwe unoda here kuwedzera vateveri vako, saka nevangani?
Kana kuti pamwe iwe unongoda kuwedzera kusangana kwevashandisi uye traffic. Paunenge uchinge uine chinangwa chako chikuru chegore, inguva yekuchipaza icho kuita zvidiki, zvinotaurika zvinangwa zvepamwedzi. Aya achave ari ako ekutsika matombo kusvika kune iro hombe, rinotungamira chinangwa. Nhanho yekupedzisira kufunga kuti ndeapi mabasa ezuva nezuva aunofanirwa kuwana mushure mekuita izvo zvinangwa zvikuru zviitike.
Tsanangura Maitiro Auchayera Kubudirira
Iwe unofanirwa kuteedzera zvirimo zvemukati kana iwe uchida kuziva kuti zvinoshanda sei. Uri kuenda kunoteedzera akaomarara metric sekutengesa uye zvinotungamira kana zvakapfava senge zvemagariro midhiya mushandisi kubatanidzwa? Mamwe metric iwe aunonyatsoda kuteedzera ndiwo ekushandisa metrics (vanhu vangani vanoona kana kurodha pasi zvinhu zvako), kugovana metrics, lead chizvarwa metrics uye zvekutengesa metrics.
Zvemukati kushambadzira chiitiko chine simba chinoda kuda kushandura zano kana chimwe chinhu chisiri kushanda. Izvo zvakakosha kuve nezvinangwa uye kuziva ako metrics ekubudirira ari. Izvo zvakare hazvidhuri, saka chenjera nemabatiro aunoita zviwanikwa. Tevedza aya matipi mashanu ekuwedzera yako yemukati yekutengesa mutambo.
Tags: gutsikanaContent Marketingzvemukati zvekushambadzira timukuyerwa kwemukatizvemukati zviwanikwazvemukati kubudirirazvemukati timu
Martha Jameson ndeye zvemukati mupepeti uye kuverenga kuverenga kwe Hushe uye DzidzoBrits. Asati awana kuda kwake kwekunyora, Martha akashanda sewebhu dhizaini uye maneja. Zvinonyanya kukoshesa zviri kushandisa ruzivo rwake, kurudziro uye ruzivo kubatsira vaverengi pamablog akafanana KutangaWritings.